တွစ်တာအခြေခံ: တွစ်တာသုံးစွဲနည်း (အစပြုသူများအတွက်) | Martech Zone
တွစ်တာအခြေခံ - တွစ်တာသုံးစွဲနည်း
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 4, 2015 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
Twitter ၏နိဂုံးကိုခေါ်ရန်စောလွန်းသေးသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ပလက်ဖောင်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်အားဖြည့်ပေးရန်မွမ်းမံမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ခံစားမိသည်။ မကြာသေးမီကသူတို့သည်လူမှုရေးခလုတ်များမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောမြင်နိုင်သောအရေအတွက်ကိုဆိုဒ်များပေါ်မှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ တွစ်တာ၏အဓိကတိုင်းတာသည့်ဆိုက်များကိုကြည့်သောအခါ၎င်းသည်ယေဘုယျထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပုံရသည်။
တိုင်ကြားချက်လုံလောက်ပြီ။ ကောင်းတဲ့အရာတွေကြည့်ရအောင်။ တွစ်တာတွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်များ၏အွန်လိုင်းကြွယ်ဝမှုသည်မတူနိုင်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကအွန်လိုင်းစကားဝိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာတွစ်တာကကျနော့်အမြင်မှာနှလုံးခုန်သံပဲ။ Facebook သည်အချက်အလက်အများစုကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးစစ်ထုတ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများသည်အလွန်ဆိုးဝါးနေသည်။ Twitter ပေါ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
တွစ်တာသည် ဆက်လက်၍ ပျံသန်းနေသည့်အချက်အလက်စီးဆင်းမှုဖြစ်သည်။ သင်အကောင့်များများလေလေစီးဆင်းမှုမြန်လေလေဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စစ်ထုတ်ခြင်းမရှိ၊ ပစ်မှတ်မထား၊ အမြဲမြင်နိုင်သည်။ အခြားလူမှုရေးပလက်ဖောင်းများနှင့်မတူဘဲသင်ပြောဆိုလိုသောအကောင့်များသည်ချဉ်းကပ်ရလွယ်ကူသည်။ ရုံတစ်ခုပစ် @douglaskarr သင်သည်ငါ၏အာရုံကိုဖမ်းပြီးငါ့ထံသို့တိုက်ရိုက်ရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ အခြားဘယ်နေရာမှာအွန်လိုင်းဖြစ်နိုင်မလဲ? အကယ်၍ သင်သုတေသနအချို့ပြုလုပ်လိုပါက hashtag သုံး၍ ဝေါဟာရကိုသာရှာဖွေပါ #စျေးကွက်ရှာဖွေရေး.
ဆိုင်းအပ် - နှင့်နိူင်ငံရေးနှင့်ရှုပ်ထွေးသောပေါင်းစပ်မှုများမပါဘဲအလွန်ကောင်းသောတွစ်တာလက်ကိုင်ကိုရှာဖွေရန်။ ကြီးကျယ်သောလက်ကိုင်အားလုံးကိုမယူရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်တိကျသောလက်ကိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်သေးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အမြဲအံ့အားသင့်မိပါသည်။ နှစ်ခုနဲ့ထပ်တူမယ့်အစားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်တစ်ခုနဲ့ကော်ပိုရိတ်အကောင့်နှစ်ခုလုံးရှိသင့်တာကိုကျွန်တော်အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်။ အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းသည်သင်နောက်ကိုလိုက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်လူများကိုစိတ်ဆိုးစေမည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်များထက်အနည်းငယ်သာပိုသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်ကိုပြင်ဆင်ပါ - ဘယ်သူကမှကြက်ဥပုံသင်္ကေတကိုမယုံ၊ မလိုက်ဘူး၊ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်အတွက်သင်၏ဓာတ်ပုံနှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်လိုဂိုတစ်ခုထည့်ပါ။ သင်၏အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်နှင့်လူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖမ်းယူနိုင်မည့်လှပသောနောက်ခံဓာတ်ပုံကိုရှာဖွေရန်အချိန်ယူပါ။
သင်၏ Bio ကိုသိမ်းထားပါ တိုတိုနှင့်ချိုမြိန်! URLs များ၊ hashtags၊ အခြားအကောင့်များနှင့်အတိုကောက်ဖော်ပြချက်များကိုကြိုးစားခြင်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ။ မင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကဘာလဲသင့်ကိုထူးခြားအောင်ဘာလုပ်ပေးသလဲ။ သူတို့ကိုသင်၏ဇီဝဗေဒ၌ထည့်သွင်းပါနှင့်ရှာဖွေသူများအားဖြင့်သင်နှင့်လိုက်နာလိမ့်မည်ရှေးရှေး။
Twitter Apps များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
Desktop ပေါ်မှာလား၊ smartphone လား၊ တက်ဘလက်လားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တွစ်တာလျှောက်လွှာ သင့်ကိုစောင့်နေတယ်! သငျသညျအပေါငျးတို့သထွက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်, သင် download လုပ်ပါနှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည် TweetDeck - ခေါင်းလောင်းများနှင့်မြည်သံအားလုံးနှင့်အတူအကျယ် - အကျယ်ပလက်ဖောင်း။
tweets - တွစ်တာသည်စာလုံးရေ ၁၄၀ ထက်ကျော်လွန်သည့်တွစ်တာအရေအတွက်ကိုတိုးချဲ့ရန်စကားပြောခဲ့သည်။ Twitter ၏အနုပညာနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအများစုသည်ကောင်းမွန်စွာတီထွင်ထားသောတွစ်တာကိုလျင်မြန်စွာသုံးစွဲရန်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်သေချာပေါက်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါဟာ haiku ရေးသားတာနဲ့တူတယ်၊ ဒါကြောင့်အလေ့အကျင့်များနှင့်အချို့သောအတွေးကြာပါသည်။ ကောင်းစွာလုပ်ပါ၊
hashtag ကိုသုံးပါ - အနည်းဆုံး hashtag တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ထိတွေ့မှုကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။ နှစ်ခုကပိုကောင်းသည်။ သငျသညျအခြို့သောလုပ်ချင်လျှင် hashtag သုတေသန, ကျွန်တော်တို့ပလက်ဖောင်းတွေအများကြီးကိုစာရင်းပြုစုထားပါတယ် (RiteTag ကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်!) ထိရောက်သော hashtag များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Twitter အသုံးပြုသူများသည်ပလက်ဖောင်းကိုသုတေသနပြုနေသည့်အချိန်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏ Twitter လက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်ပါ
သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှခေါင်းဆောင်များကိုတွစ်တာတွင်ရှာဖွေပါ၊ ၎င်းတို့ကိုလိုက်နာပါ၊ ၎င်းတို့အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေပါ၊ စကားပြောဆိုမှုကိုသင်တန်ဖိုးထားနိုင်သည့်အခါသူတို့နှင့်ထိတွေ့ပါ။
သင်၏ဖောက်သည်များကိုတွစ်တာတွင်ရှာဖွေပါ၊ လိုက်နာပါ၊ သူတို့ကိုကူညီပါ၊ သူတို့နှင့်ထိတွေ့ပါ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်ဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးရန်သူတို့၏အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။
ပိုးမွှားမဖြစ်ပါနဲ့ အလိုအလျောက်တိုက်ရိုက်သတင်းပို့ခြင်းပလက်ဖောင်းများကိုရှောင်ပါ။ မလိုအပ်သောသူများကိုစာရေး။ အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါ သင့်ရဲ့နောက်လိုက်ကြီးထွားပါ အစီအစဉ်များ။ သူတို့သည်သင်၏စိတ်ကိုထိမိစေပြီးသင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမှန်တကယ်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲသင်၏နံပါတ်များကိုအတုများမြှင့်တင်ကြသည်။
ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလာမလား? သင်၏နောက်လိုက်များတက်ရောက်ခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းအကြံဥာဏ်များဖြင့်ပွဲကိုပြန်လည်စတင်သည့် Tweets ကိုစီစဉ်ပါ။
တတ်နိုင်သလောက်အထူးလျှော့စျေးပေးပါ၊ Twitter သည်ကူပွန်နံပါတ်သို့မဟုတ်အထူးလျှော့စျေးကိုနှစ်သက်သည်။
Tweets ကပျံသန်းနေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ မင်းမှာမျှဝေစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိရင်အဲဒါကိုအကြိမ်အနည်းငယ်မျှဝေပါ။
Twitter နှင့် WordPress ကိုပေါင်းစပ်ပါ
သင်၏အကြောင်းအရာများကိုတွစ်တာသို့ autopublish လုပ်လိုပါက the Jetpack ပလပ်ဂင် feature ကိုperfectlyုံပါ!
သတိရပါ၊ တွစ်တာသည်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်၊ သင့်နောက်လိုက်များကိုစနစ်တကျကြီးထွားအောင်လုပ်ပါ။ စိတ် ၀ င်စားမှုပိုများလာသလိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနည်းငယ်တင်ပြီးနောက်သင်အနားယူတော့မည်မဟုတ်။ ဒီကနေ infographic Salesforce နောက်ထပ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအချို့ပေးသည်။ (သင် (ထိုကဲ့သို့သောအရာရှိလျှင်) သင်သည်လိုလားသူတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်မသေချာသော်လည်း၎င်းသည်အကြံဥာဏ်ကောင်းဖြစ်သည်။
Tags: သင့်ရဲ့နောက်လိုက်ကြီးထွားလာhashtags ကိုTwitter ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲRetweettweetTweetdeckတွစ်တာtwitter app များtwitter အခြေခံtwitter သတင်းအချက်အလက်twitter ရောက်ရှိရန်
ဒီဇင်ဘာ 15, 2015 မှာ 5: 13 AM